५ सय चोरे’र काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला महिनाको कति कमाउँछन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ? जान्नुहोस् – List Khabar
Home / मनोरंजन / ५ सय चोरे’र काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला महिनाको कति कमाउँछन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ? जान्नुहोस्
५ सय चोरे’र काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला महिनाको कति कमाउँछन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ? जान्नुहोस्
admin November 20, 2021 मनोरंजन Leaveacomment 106 Views
पत्रकार ऋषि धमला प्रश्न गर्ने शैली र हाउभाउले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो। हाक्काहाक्की प्रश्न गर्ने र कार्यक्रमलाई कसरी हुन्छ रोचक बनाउनेमा उनको ध्या’न हुन्छ।
कति छ ऋषि धम’लाको सम्पत्ति ?
तीन दशक बढीको पत्रकारिता अनुभव संगालिसकेका धम’ला अझै पनि क्रियाशील रिपोर्टर हुन्। धादिङ्ग जिल्लामा जन्मेका ऋषि सानैबाट चलाख थिए।
जे कुरा पनि जोसका साथ गरि हाल्ने धमलाले आफ्नो मा’ध्यमिक पढाइ उनको गृह जिल्लामा नै सकेका थिए। गाउँको पढाइ सकेपछि काठमाण्डौ छिरेका उनले काम गर्दै अध्ययन गरे। पछि उनले आफ्नाे पढाइ बिचमा छोड्नु परेको थियो। विहान पाँच बजेदेखि राति १२ बजेसम्म काम गर्ने धमलासँग अहिले भने एउटा किआ सेल्टोस कार रहेको छ।
यो कुरा उनले नोभेम्बर ७ , २०२० को ग्ल्यामरगफको एपि’सोडमा ऋषि धम’लासँग कुरा गर्दै प्रकाश सुबेदीले घरबाट बुवाको ५०० चोरेर काठमाण्डौ छिरेको धमलासँग कसरी यत्रो सम्पति र पहुँचबारे प्रश्न उठाएका थिए। तर ऋषि धमलाले त्यसको उतर मेहनत गर्ने जो कोहिले पनि सम्पत्ति कमाउन सक्छ भन्दै जवाफ दिए’का थिए।
Previous अब कहिलेबाट माैसममा सुधार हुन्छ ?
Next ऐश्वर्या र अभिषेकबीच खटपट, ऐश्वर्या र जया बेग्लाबेग्लै बस्न थाले !